SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Telugu Tsonga Turkish Ukrainian Xhosa Yoruba Zulu
Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1
Kana wakambozvibvunza mibvunzo iyi, hausi woga. Zvichienderana nekwawakatsvaka rubatsiro, unogona kunge wakapiwa mhinduro dzakasiyana-siyana. Bhuku rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 1, rinogona kukubatsira. Mazano arimo anobatsira nokuti anobva muBhaibheri. Shoko raMwari rabatsira vakawanda kuti vakurire matambudziko avanosangana nawo muupenyu. Ona kuti ringakubatsirawo sei!